तिथि मेरो पत्रु »3कारण एक पहिलो तारीख मा आफ्नो कुकुर नहीं ले गर्न
एक दम्पतीले वर्ष पहिले, एक साथीले मलाई एक नाम र फोन नम्बर दिए र उनको मित्र कल र उनको बाहिर सोध्न मलाई आषा बताए. म एक आउटडोर प्ले रमाइलो पहिलो तारीख हुनेछ लाग्यो. हामी एक पिकनिक लिन थियो, रक्सी को बोतल, कम्बल र एक सुन्दर गर्मी साँझ सँगै आनन्द. म सबै बारे सही थियो.
यो अन्धा तिथि मलाई संग पिल्ला एक आराध्य बसिरहेका मेल भयो 10 हप्ता पुरानो सुनको retriever. म यो मात्र म उसलाई साथ ल्याए त मिति थप्न सोचा. बरु, मेरो मजा सानो मित्र एक व्याकुलता हुनुको समाप्त भयो. यहाँ एक पहिलो तारीख मा आफ्नो पिल्ला लिन छैन तीनवटा कारण छन्:
1. पिल्ला हाम्रो कुराकानी अवरोध जो ध्यान को एक धेरै garnered
हामी साँच्चै प्रत्येक अन्य मा प्राप्त गर्न सक्षम कहिल्यै थिए. puppies, सामान्य मा वा घरपालुवा, ठूलो कुराकानी शुरुवात हो, तर हरेकले थियो कसरी पुराना सोध्न चाहन्थे अर्थ.
2.म एक कुकुर र छैन एक ठूलो कुकुर भएकोले, उहाँले निरन्तर ध्यान आवश्यक
यो हामी एक तिथि मा एक जोडी भन्दा कुकुर को बढी बेबीसिटर्स तेस्रो साथी साथ ट्याग थिए अर्थ.
3.पिल्ला पू ठ्याक्कै एक Aphrodisiac छैन
तपाईं एक ठूलो कुकुर छ भने, यो पागल टूट कम अक्सर हुनेछ र तपाईं अलि धेरै नियन्त्रण जब र जहाँ यी हुन.
रात को अन्तमा, म साँच्चै म मेरो मिति जान्ने मौका को धेरै थियो जस्तै महसुस गरेनन्. कुकुर पूरा देखि (उहाँले अझै एक पट्टा मा हिंड्न सिकेका थिएनन् देखि) साझा तिनलाई पछि सफाई उहाँले चासो अपरिचित सयौं थियो कसरी पुराना, म सबै रात काम जस्तै थियो गरिएको एक राम्रो जवान महिला चिन्नुको भन्दा म महसुस. कुनै दोस्रो मिति थियो, तर म एक बहुमूल्य पाठ सिके. एक पहिलो तारीख लागि घर मा पिल्ला छोड्नुहोस्.